Fankalazana ny fetin’ny Noely 2016:HITA TARATRA NY FIAINGAN’NY FANDROSOANA -
AccueilRaharaham-pirenenaFankalazana ny fetin’ny Noely 2016:HITA TARATRA NY FIAINGAN’NY FANDROSOANA
Nifanotofana avokoa ireo karazana tsena rehetra teto an-drenivohitra nandritra ny fanomanana ny fetin’ny Noely. Tsy nisy tsena tsy nahitana filaharana araka izany, na ny tsenan’ny akanjo io, na irony kojakoja fetina mianjaika mandritra ny andro fety ireo. “ Sarotra ny mandainga fa tena tsara ny tsena amin’ity, fa tsy toa ny tamin’ny taona lasa” hoy ity mpivarotra akanjo sy kiraro iray etsy Analakely. “lany avokoa ny ankamaroan’ireo entana namidiko amin’izao fotoana izao” ho indray ity mpivarotra iray sendra tafaresaka taminay ny sabotsy teo. Dia toa izany avokoa no nambaran’ireo mpivarotra nandritra ny fanomanana ny fiatrehana ny fetin’ny Noely 2016. Tsy ireo mpivarotra akanjo sy kiraro ihany, fa nifanotofana ihany koa ireo karazan-tsakafo teny an-tsena hatramin’ny andron’ny omaly. Nilaharana ihany koa mantsy ireo mpivarotra akoho amam-borona. Nanomboka tamin’ny 25 000 Ariary , ka hatramin’ny 130 000 Ariary ny vidin’izany tetsy amin’ny tsenan’ Andravoahangy. Tsy nisy toa izany anefa ny filaharana, ka samy nividy izay sahaza ny volany avokoa ireo mpiantsena.
Miakatra ny fahefa-mividy
Nihena tsy toa ny isan-taona ireo olona nimenomenona vokatry ny fiakatry ny vidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiatrehana ny fety. Niaraha-nahalala anefa fa tena nisy fiakarany avokoa izy ireny tamin’ity taona 2016 ity. isan-taona ohatra raha tsiahivina, dia nampimenomenona ny olona hatrany ny fiakaran’ny vidin’ny atody rehefa akaiky fety toa izao. Tsy nisy resaka anefa izany tamin’ity taona ity na dia nisy aza izay fiakaran’ny vidin’ny atody izao. Toa izany ihany koa ny vidin’ny akoho sy ny vorona, nefa dia nilaharan’ny olona ny fividianana izany hatramin’ny omaly. Porofo fa afaka nanao fety tamim-pifaliana avokoa ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy tamin’ity taoana ity. Efa nitombo ihany koa ny fahefa-mividy, ka dia tsy nametraka olana tamin’ny fiatrehana ny fety ny rehetra. Iny fiatrehana ny fetin’ny Noely iny ihany koa dia nahitana taratra fa miha mipaka any amin’ny fiainan’ny isan-tokantrano ny fiakaran’ny harin-karena.